July 2017 - Ceelhuur Online
July 31, 2017 admin234
Warsaxaafadeed Waxaa la rumeysanyahay in Madaxii Argagaxisada ee Muqdisho Cali Jabal lagu diley howlgal qorsheysan Muqdisho, 31 July 2017 – Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa fasaxday howlgal qorsheysan oo ciidanka Soomaalida ay la qaadeen ciidamada aan saaxiibada nahay agagaarka Tooro-Toorow oo la rumeysanyahay in lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha Maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu magacaabo […]
July 31, 2017 admin195
Warsaxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Maraykanka ee Qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen howl-gal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-shabaab. “Wasaaradda Gaashaandhigga ee Maraykanka, ka dib markii ay heshay warar lagu hawl-gali karo iyo sirdoon sax ah, waxay qaadday weerar guuleystay, kaas oo […]
July 31, 2017 admin207
Kulamadii Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muddo ku dhow 20 cisho ay u qabsoomi la’yihiin ajande la’aan, kaddib markii Kalfadhiga labaad ee Aqalka sare si rasmi ah loo furay 12-kii bishan. Warar ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in tan iyo markii la furay kalfadhiga labaad aanay illaa iyo hada wax fadhi […]
July 31, 2017 admin228
Wasiirka wasaaradda Gaadiidka Dhulka iyo cirka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad, oo maanta la hadlay, warbaahinta ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho loo dhameystirey qalabkii sahlayay duulimaadyada habeenkii islamarkaana garoonka uu shaqeynayo in ka badan 16 saacadood. Wasiirka ayaa shirkadaha duulimaadka ee ka howlgala dalka u sheegay in habeen iyo maalin si […]
Wax ka ogoow Caqabado dhowr ah oo haysta Qoraayaasha Soomaaliyeed
July 30, 2017 Cali Yare326
#caqabadaha_heysta_Qorayaasha_Soomaaliyeed. Kuma soo koobi karo dhibatooyinka heysta qorayasha soomaliyeed balse wax uun baan ka iftiimin doona. Qorayaasha soomaaliyeed waxa ay maraan dhibaatooyin kala gadisan. Waxa ay maskaxdooda, maalkoda iyo waqtigodaba ubixiyaan soo gudbinta fariin ay u’arkaan in ay bulshada ka daahsoontahay. Waxa ay uhiilinayaan horumarinayaana luqadda soomaaliyeed oo ay wax ku qoraan iyagoo helin […]
Dowladda oo Abaalmarisay 10ka arday ee ugu sareysa Imtixaanka Qaran
July 30, 2017 admin429
Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha & Taclinta Saree ee Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku abaalmarisay 10ka Arday ee ugu sareeya Imtixaanka Qaran 2016/2017 in arday waliba uu ka doorto wadanka uu rabo inuu wax kusoo barto & kuliyaddaba dalalka hoos ku xusan iyagoo la tashanaya Waalidka & Macalimiintoodaba. sidoo kale wasaaradda waxay abaal marin doontaa dhamaan ardada […]
Sawirro: Qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
July 30, 2017 July 30, 2017 admin285
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay qarax Gaari oo ka dhacay Wadada Maka-Almukarama Agagaarka isgoyska Dabka. Gaari nooca raaxada ah ayaa la sheegay in uu qarxay,iyada oo hada Gawaarida Ambalaaska ay sameynayaan gurmad deg deg ah si dadka ku dhaawacmay ay isbitaalda u geeyaan. Ilaa 5 ruux […]
Madaxweynaha Galmudug oo furay kalfadhiga Barlamaanka
July 29, 2017 July 29, 2017 admin220
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Xaaf ayaa maanta furay kalfadhiga 5-aad ee Barlamaanka Galmudug. Madasha furitaanka ayaa waxaa ku sugnaa gudoonka Barlamaanka, Xildhibaano iyo marti sharaf kale, inka badan 50 xildhibaan ayaa ka maqan Cadaado, taas oo caqabad ku ah inuu si rasmi ah u bilowdo kalfadhiga 5-aad. Barlamaanka Galmudug ayaa 50% muddada xilheyntiisa […]
July 29, 2017 admin199
Qarax xoogan ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoysyada Sos iyo Ex-Control Balcad ee Degmada Heliwaa, Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, ayaa waxa ay la kacday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo maraayay goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana ka dhashay khasaare dhaawac ah. Gaariga oo ah midka yar ee nooca […]
Sawirro: Madaxweyne Xaaf oo dib ugu soo laabtay Cadaado
July 28, 2017 admin254
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle(xaaf) iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo labtay Magaalada Cadaado xarunta Galmudug. Wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay madaxweyne kuxigeenka Galmudug , Gudoomiye ku xigeenka Barlamaanka Galmudug, wasiiro iyo xildhibaano. Madaxeynaha ayaa garoonka salaan sharaf uga qaatay cutub ka tirsan ciidanka Booliska, intaas kadib […]